magisterium Archives - Fanisana ho an'ny fanjakana
Tag Archives: Toniam-pampianaran'ny
Pedro Regis - Mijoroa ho vavolombelona momba ny fahagagana ataon'ny Tompo
Amin'ny zavatra rehetra, Andriamanitra aloha. Herim-po.
Ao amin'ny Sinu Jeso - Tsy ho ela dia hanome famantarana izao tontolo izao aho
Hanova fo maro izany. Betsaka ny hafa hikatona…
Pedro Regis - Fifangaroana lehibe
Aza avela hamitaka anao ny devoly ary hiaro anao amin'ny fahamarinana.
Pedro Regis - Maro no ho voafora
Ny olombelona dia mandeha amin'ny fahajambana ara-panahy.
Pedro Regis - Tonga ny tafio-drivotra mahery
Mijanona ho mahatoky… tsy ho voataratry ny fotohon'ny fampianaran-diso ianao.
Pedro Regis - Sambo-pinoana
Ireo izay mitoetra ho mahatoky hatramin'ny farany dia ambara ho Hotahin'ny Ray.